Home Wararka Shacabka magaalada Muqdisho oo cadaadis horleh lasaaray +Wadooyin mihiim ah oo...
Shacabka magaalada Muqdisho oo cadaadis horleh lasaaray +Wadooyin mihiim ah oo wali xiran
Qaar ka mid Wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa saakay xiran, iyadoona Amniga Magaalada ay si weyn u adkeeyeen ciidamada Ammaanka.
Isgoyska Tarabuunka, Isgoyska Banaadir iyo howlwadaag ayaa xiran iyadoona halkaasi lagu daadiyay ciidamo dheeraad ah.
Qaar ka mid ah Shacabka Muqdisho ayaa sheegay in sidoo kale maanta xiran yahay Jidka Makah Almukaramah.
Waxaa sidoo kale Howlgallo ka socdaan qaar ka mid ah degmooyinka Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Ammaanka ayaa maanta si ka duwan sidii hore gaadiidka u baaraya.
Previous articleAqriso:Khayre oo isku dayaya inoo marin habaabiyo shacabka Muqdisho
Next articleFaah faahin:Qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho
Koonfur Afrika oo Dil Logu Geystay Ganacsade Soomaaliyeed
Dekaddaha Taliyaaniga iyo iyo Malta oo loo diiday Muhaajiriin inay...